Vaovao - fonosana maharitra elaela "fanitarana" dia mitondra fiarovana bebe kokoa amin'ny fisorohana afo
Ny fonosana misy «afo» fanitarana afo dia mitondra fiarovana avo kokoa amin'ny fisorohana afo
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny fanjakana dia nandinika bebe kokoa ny fisorohana ny afo amin'ny tetik'asa fananganana trano, ary fitaovana lehibe fisorohana afo no ampiharina amin'ny fananganana injeniera. Db-a3-cd01 afo-retardant kitapo dia karazana afo-porofom-panohana mahery vaika novokarin'ny orinasa Weicheng araka ny fenitra nasionaly vaovao an'ny gb23864-2009 (fitaovana fametahana afo). Ny endrik'ilay kitapo db-a3-cd01 afo-retardant dia toy ny ondana kely, ny sosona ivelany dia vita amin'ny lamba vita amin'ny vera vita amin'ny vera, ary ny atiny kosa dia feno fangaro zavatra tsy mora may tsy azo dorana sy additives manokana. Ny vokatra dia tsy misy poizina, tsy misy tsirony, tsy misy harafesina, mahatohitra rano, mahazaka solika, mahazaka Hygrothermal, mahazaka tsingerina mangatsiaka ary mampiavaka ny fanitarana. Azo esorina sy ampiasaina indray raha sitrakao. Izy io dia azo amboarina amin'ny endriny firewall sy fireproof isan-karazany arakaraka ny fepetra takian'ny mpampiasa, ary koa azo ampiasaina hametahana lavaka mitaky fitsaboana tsy misy afo. Rehefa sendra hain-trano, ny fitaovana ao anaty fonosana maharitra afo dia hafanaina ary hohitatra hamorona fefy tantely, mamorona sosona famehezana mafy hahazoana ny fisorohana afo sy ny hafanana hafanana ary hifehezana tsara ny afo ao anatin'ny faritra eo an-toerana. Rehefa mahatratra 240mm ny hatevin'ny plugging, ny fetra fanoherana ny afo dia mety hahatratra mihoatra ny 180min.
Fotoana fandefasana: Jul-13-2020